Iipompo zeThathu eziPhezulu kunye namacebiso
Midlalo I zi ganeko
Ukuxuma okuphindwe kathathu kubandakanya okungaphezulu nje kokubophelela kabini kwaye emva kokungena emgodini. Iimpembelelo eziphumelelayo ezintathu zifuna ukusetyenziswa okucwangcisiweyo kunye nexesha elifanelekileyo lokugcina ubunzima obunokuba lunokwenzeka ngelixa besesesikweni esifanelekileyo sokutshatyalaliswa kwabo kokugqibela. Ukunceda abaxhamli abathathu bafunde isiganeko kwaye baphucule ubuchule babo, bajonge umqeqeshi uMacka Jones weSizwe iScholastic Athletics Foundation banikezela ukuloba okulandelayo ngexesha lokunikezelwa kwikholishi yonyaka ka-2015 yaseMichigan Interscholastic Track Coach Association.
Ukuloba okulula kuqala ngendlela efutshane yokusebenza. I-jumper ke ihamba ngokuphindaphinda kabini kwinqanaba elisekunene, kwaye kabini kwinqanaba elisekhohlo ukugqiba ukuphindaphinda omnye. Yenza okungenani i-reps ehlanu. Zama ukuhlala emoyeni ixesha elide xa uthumela ukusuka ngasekunene kunyawo olukhohlo, kwaye ngokulandelanayo, ukukunceda ukulinganisa isigaba sokunyuka kwesithathu.
Ishintsho sesigaba sesinyathelo, uJohn wachaza ngethuba lakhe le-MITCA, "inxalenye engaphethekiyo yokuxuma kathathu," ngokukodwa kwi-jumpers ende eguqukayo ukuya ekutheni kathathu. UJonas waqhubeka. Zibaleka kwaye zizama ukuxhuma kunokwenzeka. Kodwa xa ufumana (jumper) omele atyele kathathu, kwaye i-jumper ende, ucinga ukuba injongo yabo yintoni? Bafuna ukuya emhadini ngokukhawuleza; bafuna ukufikelela kuloo nqanaba elide lokuxhuma.
Ngoko ke baya kwenza ntoni, baya kugijima baze balayishe kuloo wokuqala ... ngoko baya kugxuma, kwaye baya kuhamba ngelo ... ke baya kuphazamiseka. Amacangci abo aphelelwe isikhundla, umzimba awusesikhundleni, kwaye kufuneka abuyele kulo. Ngoko yodwa indlela yokufumana kwakhona ukwenza isinyathelo ngokukhawuleza, ukulayisha ukuze (ukugqibela).
... Ndibiza ngokuba i-jump twice. Ngenxa yokuba yonke into ababeyenzayo yayithatha izibini ezimbini. Baye baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde.
Ngethuba ekwenza oku, kunye nokunye ukuqhuma okuphindwe kathathu, i-jumpers kufuneka igcine iminwe yabo xa ihamba emoyeni ixesha elide kunokwenzeka, kodwa kufuneka igweme ukuhlaselwa kwesithende kuqala. Endaweni yoko, i-jumpers kufuneka izame ukuhlalisa ngezantsi njengoko kunokwenzeka.
Ukususela ekuqalekeni, kunye nekhohlo ekhohlo kunye neenyawo ezinqamlekileyo ukusuka kumzila, i-jumper hops phambili phambili emlenzeni. Idolo elifanelekileyo lifanele ligcinwe ngqo njengoko linokwenzeka xa lixhoma. Njengokuba uqhube phambili, yenza ezimbini ezongezeleleyo zomlenze ezinqamlekileyo kwiinyawo ezingasekhohlo ukugqiba ukuphindaphinda omnye, kwaye wenze ubuncinane ubuncinane bobahlanu. Le ndlela yokuncedisa inceda ukunciphisa ukusila kwezemvelo kwezintlu ezinokuthi zenzeke ngexesha lesithathu.
Macka uyachaza: "Ukuba lo msebenzi owehlayo uya kukunciphisa," u-Macka uyachaza, "xa usuqaqambile okanye uxuma ngokukhawuleza okanye ukuxuma okuphindwe kathathu, kukho ukunciphisa. umnatha; uzama ukuzikhusela.
Ingxaki kukuba, sizama ukwenza (isivakaliso), kwaye sizama ukutshintshisa ukuba isantya yonke indlela ngokudlula. Ukuba uqhuba kwaye u (uhlehlise iinqumlo zakho), kwaye ke kufuneka uphinde uphinde ungene kwelinye iqhosha, uvele uthobe phantsi. Sifuna ukukhawulela oko kunokwenzeka. "
Ngaloo ndlela yokuhamba, kunye nezinye i-drill jump drills, i-jumpers kufuneka ilondoloze i-posture e-erect, ngaphandle kokuxhomeka ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla. Ukongezelela, abadlali abafanele bazame ukugxuma kakhulu kakhulu-kufuneka bajonge kude, kunokuphakama.
Ukunceda ukuqala i-jumpers ezintathu zivakalelwa ixesha kunye neshyhym efunekayo kulo mcimbi, faka iibonki ezintathu kumgca, iinyawo ezi-5 ngaphandle. I-jumper ithatha indlela emfutshane isebenzayo ize iqhube iindidi ezintathu zokuxuma. Unyawo lomdlali kufuneka ahambe eduze kwesiganeko esifanelekileyo kwisigaba ngasinye.
Njengoko i-jumper iphucula, sasaza iindidi kude. Ekugqibeleni, yongeza umgama phakathi kweesibini kunye neyesithathu, ukuze uncede umsebenzi we-jumper ekutshintsheni phakathi kwemilenze eyenzeka ngexesha lesigaba.
Omnye Umlenze Ukhupha
Ukususela kwisiqalo sokuma, i-jumper iphelela phambili, ishintshe imilenze ngomda ngamnye. Abadlali baqala ngeemida ezifutshane kwaye basebenze indlela yabo ukuya kwimida emide, xa nje begcina isigqi esivumelanayo. Le drill ingakhokelela kumdlalo othiwa "ubuncinci bemithwalo," apho abagijimi beboshwe eminye imilenze phakathi kwamanqaku amabini, malunga nee-15 ukuya kuma-20 iiyadi okanye kumitha. I-jumper ehamba umgama ngelixa isebenzisa imida embalwa. Umdlalo ungasetyenziselwa ukuchonga abaxhamli abathathu; kwakhona abaqeqeshi baya kukhangela abagijimi abanokubopha ekude.
UJonas uthi amanxeba amathathu okuxuma abuye ancede ekudumeni kwexesha elide. Uhlobo oluthile lokuxuma, uthi, "kudala amandla angasebenzi. Ibenza bafumane ukufumana kwakhona oko kuyimfuneko. Ikunceda ngonyawo lweenyawo; kunceda nge-posture. "Ukongezelela, zonke iipolisi ezikhankanywe ngasentla zingenziwa kwizindlu, ngokukhethekileyo kwindawo yokuzivocavoca, enikwe abanye.
Ukuvavanya i-jumpers ezintsha ezintathu, uJones ucebisa ukuba abaqeqeshi baqale bajonge indlela abaxhamli bezisebenzisa ngayo iinyawo zabo - qi ni sekise ukuba bafika ngokufanelekileyo kwaye baxoshe umzila ngokukhawuleza. Emva koko, qinisekisa ukuba izikhwepha zabo azidibanisi. "Hlala ubude emagqabeni," yinto efanelekileyo, "kusho uMacka. I-torso ye-jumper kathathu, uyongezelela, kufuneka agcine umgca wecala ngokuthe ngqo kwi-jump.
Kwiphepha elithile lomntu, uJonas ukholelwa ukuba "yonke i-jumper kufuneka ibe ne-punch-in-face-face-attitude. ... udinga ukuthatha ingqondo efanayo kwixuma elithathu. Yimidlalo enobudlova. Kufuneka ube nobudlova. Ngoko ukuba unabantwana abanomlinganiselo omncinci we-mean streak, lohlobo olukhuphisanayo, luza kuphuma (ukuxuma kathathu), kuba baya kufuna ukuwina. Kwaye baya kubeka yonke into kuyo kwaye bayazama ukuphuma kude. "
Funda ngaphezulu malunga nokuxuma kathathu:
Isingeniso kwiJump Triple
Indlela yokwenza iJump Triple, Isinyathelo-ngeNyathelo
Amaxesha amahle kakhulu kwiJump Olympic Triple Jump
Indlela yokwenza i-Shot Put Glide Technique
Iipompo eziphezulu zeJump: IQuaching Beginning High Jumpers
Yintoni i-Decathlon yama-Olimpiki?
Ukufunyanwa kweSayensi emva kweSunami
Iingcebiso zokubuyisela ii-4 x 200-Meter
Amazwi omxhasi ngamnye Umfundi waseNtaliyana kufuneka afunde
Ukudweba Imithi Engokoqobo
Kutheni sifundisisa iJografi?
Itheyibhile Yamandla Enobumba Bodwa